Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » सामाजिक कुरीतिले निम्त्याएको दुःखान्त :छोरी प्रेमीसँग भागेपछि जरिवाना तोकियो, बाबुले आत्मह’त्या रोजे
सामाजिक कुरीतिले निम्त्याएको दुःखान्त :छोरी प्रेमीसँग भागेपछि जरिवाना तोकियो, बाबुले आत्मह’त्या रोजे
‘पञ्चायत’ को दबाव खेप्न नसकेर श्यामलालको मृ’त्युवरण
सिराहा, असार १५ । लहान नगरपालिका वडा नम्बर २४ निवासी श्यामलाल रामको घरमा १२ गते शुक्रबार छोरीको डोली उठ्नुपथ्र्यो । बुबा श्यामलालले इष्टमित्रलाई खबर गरिसकेका थिए । दुलाहा पक्षलाई तिर्नुपर्ने दाइजोसमेत बुझाइसकेका थिए । बिहेका लागि चाहिने सबथोक जुटिसकेको थियो ।
विडम्वना ! वर्षौंदेखि साँचेको शुक्रबारको खुसी आउनुअघि नै यो परिवारमा ब ज्रपात आइलाग्यो । नाचगान र भोजभतेरको तयारीमा रहेकाहरू शो’कमा छन् ।
बिहीबार श्यामलालले आ’त्मह त्या गरे ।
श्यामलालले त्यसै आत्मह त्या गरेका होइनन् । उनको मृ’त्युको कारक समाजमा व्याप्त गलत परम्परा र रीतिरिवाज बनेको छ ।
छिमेकी जिल्ला सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका ४ महुलियामा बन्दी रामका छोरा महेशसँग बिहे पक्का भयो । दाइजोबापत नगद २ लाख रुपैयाँ र चार तोला सुन ३२ जेठमा बुझाएका थिए । दाइजो बुझाएपछि असार १२ गते शुक्रबार बिहे हुने तय भयो ।
६० हजार जरिवाना तिर्नैपर्ने भएपछि श्यामलाल एकछिनमा आउँछु भनेर पञ्चायतबाट निस्किए । तर, कहिल्यै फर्केर आएनन् । उनी गोविन्दपुर झुटकी जाने बाटोको बीचमा पर्ने ‘सरे’ खोलास्थित आँपको बोटमा झु’ण्डिएको अवस्थामा भेटिए ।
यदि पञ्चायतले जरिवाना तिरेपछि मात्रै छोरीको बिहे गर्नुपर्ने शर्त नराखेको भए १२ गते कान्छी छोरीकै बिहे गर्न राजी भएका थिए उनी । जरिवाना तिर्नैपर्ने निर्णय आएको थिएन भने अहिले उमेर नपुगेकी कान्छी छोरीको हातमा मेहन्दी हुन्थ्यो । तर, अहिले उनी पिताको कि रिया बसेकी छन् ।
उमेरले डाँडा काटिसकेका श्यामलालका आमाबुबा गेनावती र नथुनी जीवितै छन् । श्यामलालकी श्रीमती सुनैरदेवी भा वविह्वल अवस्थामा छिन् । कमाएर परिवार पाल्ने जिम्मेवारी श्यामलालकै काँधमा थियो । उनको मृ त्युले परिवारलाई शो’कमा त डुकाएको छ नै, छाक टार्नसमेत समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
श्यामलालको आ त्म ह त्याले तराईमा बसोबास गर्ने चमार जातिमा कुप्रथा कति जकडिएको छ भन्ने देखाउँछ । जसरी उनीहरूले २०५८ मा सिनो फ्याँक्ने आन्दोलन गरे, त्यसरी नै अब दाइजो र कथित ‘पञ्चायत’को कुप्रथाविरुद्ध लड्नुपर्ने भएको छ ।
सिरहाका अधिकारकर्मी सुनिल साह श्यामलाललाई समाजद्वारा संरक्षित हानिकारक सामाजिक मान्यताले आत्म ह त्या गर्न बाध्य बनाएको बताउँछन् । ‘आत्महत्याका घटनालाई मैले बाध्यात्मक ह त्या भनेर विश्लेषण गदै आएको छु’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिले एक क्षण आवेगमा आएर आफ्नो ज्यान लिँदैन । यस घटनाका पछाडि धेरै कारण हुन्छन् । धेरै कारकले भूमिका खेलेको हुन्छ ।”
अधिवक्ता समेत रहेका साह यस्ता घटनामा संवेदनशील भएर विश्लेषण हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, भित्री तहसम्म अनुसन्धान गर्ने परिपाटी प्रहरीमा अझै सुरु हुन नसकेको भन्दै उने भने, ‘समाजले आत्मह त्या गर्ने व्यक्तिलाई दोषी करार गरिदिने र अनेक उपनाम जस्तै हुतिहारा, केही गर्न नसक्ने कमजोर मनस्थिति भएको, परिस्थतिसँग सामना गर्न नसक्ने, असफल व्यक्ति भनी होच्याउने गरेको पाइन्छ । सुरक्षा निकायले समेत भित्री तहसम्म अनुसन्धान गर्ने गरेको छैन ।’
उनका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५ को १ उपदफामा कसैले कसैलाई पनि आत्मह त्या गर्न दुरुत्साहन गर्न वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । उपदफा २ ले आत्महत्याका लागि दुरुत्साहनको कसुर गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी विवाहमा दाइजोका नाममा नगद वा चल अचल सम्पत्ति लिनेमाथि पनि कानूनले रोक लगाएको छ । श्यामलालकी छोरीको बिहे नहुँदै दाइजो लिनेहरु पनि कानूनको नजरमा दोषी हुन् । जेठी छोरीका लागि दाइजो लिनु र त्यसलाई पचाउन उमेर नपुगेकी वालिकासँग बिहे गर्नु अर्को अ पराध हो ।
श्यामलालकी जेठी छोरी जो, आफैंले रोजेको प्रेमीसँग भागिन्, त्यो उनको अधिकार हो । तर, पिताले अरुलाई दाइजो नबुझाउँदै उनले आफ्नो प्रेमीबारे जानकारी दिएको भए श्यामलालले आत्मह त्या गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने थिएन कि ?
अनलाइनखबर बाट ।